Imandarmedia.com.np: जब ओलीको गाउँ पुगेर बाबुरामले काटे ओलीकै कुरा !
Main News, Political » जब ओलीको गाउँ पुगेर बाबुरामले काटे ओलीकै कुरा !
जब ओलीको गाउँ पुगेर बाबुरामले काटे ओलीकै कुरा !
भट्टराईले आफ्नो पूर्वपार्टी माओवादी केन्द्रमाथि खाओवादी भइसकेको आरोप लगाए । उनले ठूला दलका नेताले मुलुकका खोला र भ्रष्टाचार गरेर नाला बेचेर धन थुपारेको भन्दै भट्टराईले ती दललाई भोट नदिन मतदातालाई अपिल गरे । काठमाडौं टुडे
२०७४ असार १० मा प्रकाशित ।